HomeTurkeyMpaghara Aegean35 Izmir
Izmir okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na ozi ọma
Izmir İZBAN, Metro na Tram Map:
Oge ụgbọ ala Izmir Balçova na emepe emepe na ọnụahịa tiketi; Cargbọ ala USB na mpaghara Balçova nke Izmir dị na mpụga Mahadum Economics Izmir. Maka ndị na-eche ọtụtụ mita nke ụgbọ ala Izmir USB bụ azịza 316 mita. Ogologo ahịrị [More ...]
Oge İzmir Metro: İzmir Metro anọwo na-arụ ọrụ na nzuzo na ọdụ dị n'okpuru ala na ọdụ ụgbọ n'okpuru obodo n'ime ọtụtụ afọ. Zmir, nke nwere otutu uzo ugbo ala, [More ...]
A kwadebere atụmatụ atụmatụ ibu obodo nke Izmir; İzmir Obodo ukwu preparedzmir kwadebere İzmir Sustainable Urban Logistics Plan (LOP with) na ebumnuche ime njem na njem ibu n'obodo ahụ dabere n'ụkpụrụ European na njirisi sayensị. Lopik, [More ...]
3 Na Worldbọchị Disemba ofbọchị Ndị Mmadụ Nwere Nkwarụ, 61 erutela ọnụ ọgụgụ ndị jidere Red Flag na Izmir. Red Flag na-anọchite anya mpaghara nwere ike inweta ụmụ amaala nwere nkwarụ. Dị ka ndị mbụ na naanị emejuputa atumatu Izmir, Turkey [More ...]
Lọ ọrụ 6 maka asọmpi maka Injin nke İzmir Karabağlar Metro; ; Na nro nke Karabağlar Metro, ụlọ ọrụ 6 nyere ọnụ ahịa. Ọ ga-emechi ihe ndị dị n ’ụbọchị ahụ na-abịanụ. Emere ọkwa nke atọ na nro nke Karabağlar Metro project. [More ...]